Ujeedooyinka iyo hiigsiga Somalism – Majaladda
Ku saabsan Somalism
Ujeedooyinka iyo hiigsiga Somalism
Ujeedka rasmiga ah ee wakaaladda Somalism ayaa ah in la helo goob si joogto ah ugu faalooto su’aalaha caalamiga ah ee saameynaya Soomaaliya, iyadoo la isu keenayo aqoonyahano aqoon u leh diblomasiyadda, nidaamyada dawladeed, maaliyadda, warshadaha, waxbarashada, iyo sayniska. Majaladdaha ay soo saarto Somalism waxaa lagu tiriyaa mid kamid ah majaladaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya loogu akhriska badan yahay. Tan iyo 2015, majaladda waxay daabacday dhowr maqaallo oo faallooyin cajiib ah ka bixiyay geedi socodka dowladnimada Soomaaliya iyo xariirka caalamiga oo ay kamid yihiin,…Danta Qaranka
Wakaaladda Somalism waxaa aasaasay Cabdijabaar Sh. Axmed, oo ah qoraa iyo falanqeeye Soomaaliyeed oo ku taqasusay cilmiga diplomasiyadda caalamiga, Siyaasadda iyo Dhaqaalaha. – “Ujeedka rasmiga ah ee loo aasaasay Somalism ayaa ah in la helo aragtiyo iyo mawduucyo cilmiyeysan oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Mawduucyada Siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa mid culus laakiin aan ahayn mid cilmiyeysan, aan nooleyn laakiin aan wali gebiga ka dhicin” – ayuu yiri Cabdijabaar Sh. Axmed
Ujeeddooyinka guud ee hagta waxqabadyada iyo xiriirada hal dowlad ay ku leedahay isdhexgalka ay la leedahay dowladaha kale. Horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda waxaa saameyn ku leh tixgelinta gudaha, siyaasadaha ama dhaqanka dowladaha kale, ama qorshayaal lagu hormarinayo nashqadaha siyaasadeed ee gaarka ah. Siyaasadda Arrimaha Dibadda waa natiijada guud ee geedi socodka ay dowlad ugu tarjunto himilooyinkeeda guud iyo himilooyinkeeda howlo ficil oo gaar ah si loo gaaro ujeeddooyinkeeda loona ilaaliyo danaheeda qaran. Diblomaasiyadda ayaa ah dhaqanka wadaxaajoodka u dhexeeya wakiilada dawladaha, si saamayn loogu yeesho go’aamada iyo habdhaqanka dawladaha shisheeye iyada oo loo marayo wadahadal, gorgortan, iyo qaabab kale oo aan dagaal ahayn. Diblomaasiyadda badanaa waxaa loola jeedaa xiriirka caalamiga ah ee lagu fuliyo shafeeca diblomaasiyiinta xirfadlayaasha ah iyadoo la tixgelinayo arrimo mowduucyo kala duwan leh.
Danta qaranku waa fikradda ugu muhiimsan ee xiriirka caalamiga. Waa fikradda ugu muhiimsan ee siyaasadda arrimaha dibedda maadaama ay bixinayso maaddada ku saleysan siyaasadda arrimaha dibadda. Inta la dejinayo siyaasadda arrimaha dibedda, dhammaan madaxweynaha waxaa haga danaha ay ka leeyihiin qaranka.
Ujeeddada laga leeyahay siyaasadda arrimaha dibedda ayaa ah in la sameeyo xiriir dibadeed si loo gaaro danaha qaranka illaa inta ugu badan laakiin ma sahlana in si sax ah loo go’aamiyo waxa ummaddu dan qaran u ah. Fikradani waa mid aan mugdi ku jirin oo ay adag tahay in la qeexo.
Qeexitaanka danaha qaranka waxay ku xirantahay mowqifka uu qaranka ka qaatay dhinacyada kala duwan ee xagjirka ah sida himilooyinka kahortaga danaha gaarka ah, himilooyinka kahortaga kuwa waaqiciga ah, welwelka muddada dhow iyo kan fog, iyo tabashooyinka dhaqameed iyo shaqsiyeed.
Madaxda Soomaaliya inta badan waxay ku celceliyaan in dalal shisheeye iyo QM ay soo farageliyan siyaasadda dalka oo aysan u madax banaaneyd danahooda qaran. 2019-kii Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay amartay in uu dalka isaga tago wakiilka QM iyada oo ku eedaysay in uu farogeliyay madaxbanaanida dalka. Bayaan kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibada ayaa lagu sheegay in Nicholas Haysom, wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, aan loo baahnayn uuna ka shaqayn karin dalka gudihiisa, taasoo si buuxda u muujinaysa in dalka laga mamnuucay. “Go’aankani waxa uu salka ku hayaa kadib markii uu si cad u jebiyay hab-maamuuskii iyo dhaqankii ku habboonaa xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, si bareerna ah u farageliyay madaxbanaanida dalka,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Go’aanka dowladda Soomaaliya ayaa imaanaya kadib markii Haysom uu waraaq ku taariikhaysnayd 30-ka diseembar u diray wasiirka amniga taasoo walaac ka muujinaysa ku lug lahaanshihii eedayntii loo jeediyay ciidamada ammaanka oo Qaramada Midoobay taageerto ee xarigii Mukhtaar Roobow 13-kii diseembar, oo ay ku dhinteen 13 qof oo rayid ah rabshado ka dhacay magaalada Baydhabo.
Waraaqda Haysom ayaa sidoo lagu weydiiyay wasiirka in uu sharaxaad ka bixiyo qaabka sharaciga ah ee loo cuskaday xariga Roobow. Waxa sidoo kale la weydiiyay in wax tilaabo ah la qaaaday si loo baaro dhacdooyinka dhimashada keenay intii ay rabshaduhu ka socdeen magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay in Qaramada Midoobay ay ogaatay in intooda badan dadka la xiray ahaayeen caruur. Waraaqda Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale waxaa la socotay waraaq ka timid Midowga Yurub, Jarmalka, iyo Britan oo ay ku sheegeen in ay joojiyeen taageeradii ciidamada booliiska maamulka Koonfur Galbeed sababo la xiriira tilaabadoodii doorashadii ka dhacday halkaas ee lagu doortay Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen.
Soomaalida oo dhan, siyaasaddoodu dhankii ay doontaba ha u janjeerto eh, Itoobiya, Kiinya iyo weliba dalal badan oo beesha caalamka kamid ah, dhammaan waxaa la isku raacsanyahay inay si aan xad lahayn xilligaan faragelin ugu hayaan arrimaha Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, waxa jira aragtiyo iyo sheegashooyin kala duwan oo kasoo baxaya dabeecadda, xuduuddaha iyo saamaynta ay faragelinta gacmaha shisheeye ku leeyihiin khilaafka Soomaalida dhexdeeda ah.
Faragelinta gacmaha shisheeye oo aan halkaan lagu soo koobi karin waxa ay ina tusinaysaa in madax-bannaanida qaranka ay tahay mid muhiim ah. Soomaaliya madax-bannaanida heli mayso illaa ay isku filnaansho gaarto. – Madax-bannaanida waa fikir siyaasadeed oo muhiim ah. Waxayna ku saabsan tahay sida nidaamka siyaasadeed loo unkay loona ilaaliyo. Markii aan ku dhex noolaanno bulsho siyaasadeed oo dhaqan soo jireen ah u leh nabadeynta iyo amarka kala-wareejinta ee nidaamka dowladeed, waxaan u imaan karnaa inaan qaadanno kala-dambayn siyaasadeed, iyo madax-bannaanidaba. Madax-bannaanida ayaa gacan ka geysaneysa ilaalinta xasilloonida unugga siyaasadeed: madax-bannaanida ayaa muujisa xeerarka iyo qawaaniinta muhiimka u ah xukunka nidaamka siyaasadeed, waxaana laga dhexlaa heshiis bulsho oo loo wada siman yahay. Si loo illaaliyo danaha qaranka waxaa lagama maarmaan ah in la helo madax-bannaanida qaranka.
Faragelinta marka ay noqoto, waddooyinka ay adeegsadeen dowladaha shisheeye marka ay rabaan in ay faragelin ku sameeyaan dalalka taagta daran waxay adeegsadaan haayadaha NGO-yada. “.. Peter Hallward wuxuu dhacdadii Hayti ugu magac daray NGO-yado inay yihiin “Humanitarian face of imperialism” waji-samafaleed oo la isku gumeysto.
Dagaaladii soo maray dunida qarnigii tagay iyo wakhtigii la dhisay Qaramada Midoobay (United Nations) ayaa sanadkii 1945 waxaa soo caan baxay magaca NGO oo macno ahaan u taagan (Non-government Organizatioin). Inkastoo ay taariikh sheegayso magaca NGO-yada ay soo baxeen qarnigii 17aad -18aad. Kuwaasoo loo aas-aasay dhaqdhaaqyadii addoonsi kaxoroobidda iyo dhaqdhaaqyadii looga soo horjeeday cadaadisyadii lagu haayey dumarka inay helaan xaquuqdooda insaanimo iyo kuwii shaqaalaha ku doonayeen xaquuqahooda. Markii ay dhaqdhaaqyadaasi ka dhasheen natiijooyin ayaa waxaa sii balaartay NGO-yadii. Iyadoo la xuso in sanadkii 1914 dunida waxaa kajiray 1083 haayado gargaar (NGO).
Dagaaladii ka dhacay wadamada Galbeedka iyo xoreyntii wadamada Afrikaanka ee la gumaysan jiray iyo loolankii dagaalkii qaboobaa waxay sii xoojiyeen in awoodihii is-haystay ay mid walbo samaysato haay’ad gargaar ah oo ay ku kasbanayso dowladaha kale. Laga soo bilaabo hano qaadka ilbaxnimada aadamaha, siyaasada dunida waxay ahayd mid isa saameysa mar walbana waxa jirayay xoogag saameyn toos ah ku yeelan kara hab maamulka siyaasaded ee dhulal kale, arrintaas waxaa sababayay kororka aqoonta oo horumarinaysay dhaqaalaha isla markaasna keeneysay danaynta dhulal & Baddo ka baxsan waddamada horumarayay. Sidoo kale dowladihii wax gumaysan jiray inay caawimaad u fidiyaan dowldihii ay gumaysan jireen iyadoo kadhex arkayay masaalixooda ama dad kale u arkayeen magdhow iyo saaxiibtinimo. Markii ay sanadihii danbe sii kordheen tirada haayadaha NGO-yada ka jira wadamada dhiban isku qiyaasna noqon waayeen tirada haayadaha iyo natiijada horumarineed ayaa la isweydiiyay, ‘NGO-yada ma dhaqaale kobcin ayay sameeyaan mise dib udhac iyo ujeedooyin kale?
Shamima Axmed oo macalimad ka ah jaamacadda Northern Kentucky isla markaana qortay buugga layiraahdo (NGOs in International Politics) waxay xustay in dalkaas siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba u dib-dhacsan yahay, iyadoo ay ka hawl galaan NGO-yo badan oo ku dooda horumarinta iyo wanaajinta xaaladda dadka fuqarada ah.
Arrimahaas kore waxay sababeen wadamo badan inay sharciyo gooni ah kasoo saaraan NGO-yada caalamiga ah ee dalalkooda ka hawl galaya. Tusaale ahaan Ruushka sharciyadiisa wuxuu gaarsiiyay NGO-ga ka diiwaan gashan dalka gudihiisa haddii uu doonayo inuu ka hawl galo arrimo la xariira siyaasadda, kana helo dhaqaale wadan kale waa inay isku diiwan geliyaan inay yihiin urur wakiil u ah dowlad shisheeye.
Qoraa iyo aqoonyahaan Cabdiweli Maxamed Cali, wuxuu buuggiisa ku sheegay dhacdo shaqsi ahaan soo martay wakhtigii dowladdii KMG uu ahaa Ra’isal wasaaraha Soomaaliya. Waxaa jira buug uu qoray aqoonyahankaan, buuggaas waxa loogu magac daray ‘A challenging transition in Somalia. Waxaa buuggaas ku jira qoraalo xasaasi ah, haddii aan ka soo qaadano qodobka ku saabsan haayadaha gargaarka. “Waxaan xafiiskeyga marar badan ugu yeeray Haayada UN-ka iyo Haayadaha Gargaarka Caalamiga ee ka hawlgala Soomaaliya aan uga sheegay dhibaatada aan wajahayno. Waxay ii wada jeediyeen garbaha, ayagoo oo aan ka naxaynin nolosha dad badan oo Soomaali ah oo gaajo u geeriyoonayo.” – Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, PhD
Wadamada arrimahaan NGO-yada ka badbaada inta badan waxaa farogelin ku sameeyay dowladda. Iyagoo u tilmaamaayo adeegyada ay ugu baahan yihiin, kadibna kala wareega xilka hawshaas, loona dhiibo masuuliyiin lagu kalsoon yahay waxqabadkooda. Sidoo kale Hindiya iyo Itoobiya, waxay dowladahooda xoojiyeen NGO-yada gudaha dalka laga leeyahay oo laga dhigay kuwa loo carbiyay ka shaqeynta masaalixda dalka. Kadibna waxa lagu khasbaa NGO-yada caalamiga ah inay la shaqeeyaan kuwaas gudaha.
Adduunka maanta wuxuu iska noqday mid la iska haysto xagga maskaxda iyo dhaqaalaha, dadkii aan labadaas ka xaroobin, iyagoo isku haysta inay xor yihiin, ayaa la gumeysanayaa. Gumaysiga dunida maantana ma ahan siddii kii waayihii hore jir ahaan la israran jiray balse waxa la iska rartaa caqliga iyo maskax ahaan iyo kheyraad ahaan. Taas macnaheedana ma aha, qofku inuu khalad u fahmo la shaqeynta dowladaha caalamka ee ay masaalixdu dhexmari karto ama qolo walba oo ay ka dhaxeyn karto masaalix ay dan ugu jirto. Sababtoo ah bani’aadamka makala maarmo weyna isku baahan yihiin ayagoo kala dhaqan iyo diin ah. Isku baahnaantaas ayaa keenayso in aadanaha dhex marto wada xaajood iyo wax wadaagid.
Waxaas oo dhana waxaa cabbiri karo dad awood, karti iyo khibrad uleh fahmida masaalixda la isku darsanaayo, khasaaraha ku jiri kara iyo haggardaamooyinka ku hoos qarsoon. Dadkaas oo isla markaana doonaya dhawrista jiritaanka mustaqbalka jiilashooda jooga iyo kuwa soo socda. Waa sababta ay u noqotay lagama maarmaan jiritaanka Somalism. Qofka xiisaynaayo kamid noqoshada Somalism waxaa ugu horeeyo marka hore waa inuu qofkaas raadiyaa nuxurka iyo qaababka aan u shaqeyno, waxyaabaha aan horey u daabacnay, sidaas awgeed qorayaasha mustaqbalka waa inay ku bilaabaan iyagoo daalacanaya kaydkeena.
In kasta oo aan isku dayeyno inaan iska ilaalino adeegsiga aragtida qaar, qorayaasheena waa awoodaan inay bixiyaan xigashooyin ku habboon wixii xaqiiqo ah. Haddii aad xiisaynayso inaad kamid noqoto Wakaaladda Somalism waxaad nagala soo xariiri kartaa emaylka majaladda@somalism.so